The Politics Of Myanmar's Changing Tea Culture - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Dec 06 2017 02:25 AM
Posted 06 December 2017 - 02:25 AM
Pulling low wooden stools out from underashort square table,agroup of longyi-clad men sits down at an open-air tea shop in downtown Yangon, Myanmar.
One man makesakiss-kiss noise and calls out an order to the young waiter. Moments later, porcelain teacups filled with steaming laphet yay — sweet Burmese tea carefully mixed with black tea, evaporated milk and sweetened condensed milk — start to hit the table, and the men's conversation begins.
ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်က လေးထောင့်ကျကျစားပွဲခုံလေးကနေ ခွေးခြေပုလေးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး လုံချည်ဝတ်ထားသော အမျိုးသားတွေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ ထိုင်ချလိုက်သည်။
အဲထဲက တယောက်က ချွတ်ချွတ်လို့ အော်ပြီး စားပွဲထိုးလေးကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ ခဏကြာတော့ လက်ဖက်ကျရည်ရယ်၊ နို့ဆီရယ်၊ နို့စိမ်းရယ် ရောထားသော လက်ဖက်ရည် တခွက်ရောက်လာပြီး အမျိုးသားတစုရဲ့ စကားဝိုင်းလည်း စတင် အသက်ဝင်လာသည်။
Also tagged with one or more of these keywords: Politics, Tea
Started by BurmeseNews , 13 Jan 2017 alternative, Politics